Otu esi eme ka ihe ederede Blog gi karia ka ihe kacha emetuta. | Martech Zone
Otu n'ime ihe mere m dere m ụlọ ọrụ ịde blọgụ akwụkwọ afọ iri gara aga bụ iji nyere ndị na-ege ntị aka ịde blọgụ maka ịre ahịa engine. Ọchịchọ adịghị ka usoro ọ bụla ọzọ n'ihi na onye ọrụ ọchụchọ na-egosi ebumnuche ka ha na-achọ ozi ma ọ bụ nyocha maka ihe ha zụrụ ọzọ.
Chọta ịde blọgụ na ọdịnaya dị na post ọ bụla adịghị mfe dịka ịtụba ụfọdụ mkpụrụokwu n'ime ngwakọta… enwere ndụmọdụ na aghụghọ ole na ole ị nwere ike iji wee bulie post ahụ na itinye ego ọ bụla na ntanetị.
Nchịkọta zuru oke nke ibe ọ bụla
Aga m ewere na nke gị A na-edozi usoro njikwa ọdịnaya zuru oke, na na blog gị bụ ngwa ngwa na mobile anabata. Nke a bụ ihe iri nke dị mkpa mgbe igwe injin gị cra na ihe edepụtara na saịtị gị.
Peeji Mbụ - Ka ọ dị ugbu a, ihe kachasị mkpa na peeji gị bụ aha aha. Mụta otú ebuli mkpado aha gi na ị ga-abawanye ogo na pịa-site ọnụego gị blog posts na search engine N'ihi peeji nke (SERPs) budata. Debe ya n'okpuru mkpụrụ edemede 70. Hụ na ị gụnyere nkọwapụta siri ike maka ibe - n'okpuru mkpụrụedemede 156.
Zipu Post - a na - akpọ ngalaba URL nke na - anọchite anya post gị post slug ma enwere ike dezie ya n'ọtụtụ nyiwe ntanetị. Nginggbanwe ogologo post slugs n'ime mkpụmkpụ, isiokwu-centric slugs kama ịnwe ogologo oge, ihe mgbagwoju anya post slugs ga-eme ka ịpị-ọnụego gị site na peeji nke nsonaazụ ọchụchọ (SERPs) ma mee ka ọdịnaya gị dị mfe ịkekọrịta. Ndị ọrụ nchọta ihe nchọta na-enweta ngwa ngwa karịa na nchọta ha, yabụ atụla ụjọ iji kedu, kedu, onye, ​​ebee, mgbe, na ihe kpatara na slugs gị iji bulie slug ahụ.
post Mbụ - Ọ bụ ezie na aha peeji gị nwere ike kachasị maka ọchụchọ, aha post gị na h1 ma ọ bụ h2 mkpado nwere ike ịbụ isiokwu na-adọrọ adọrọ nke na-adọta uche ma na-adọta ọtụtụ clicks. Site na iji mkpado isiokwu, ị na-ekwe ka igwe nchọta mara na ọ bụ akụkụ dị oke mkpa nke ọdịnaya ahụ. Platformsfọdụ nyiwe ịde blọgụ na-eme ka ibe akwụkwọ na aha isiokwu bụrụ otu. Ọ bụrụ na ha emee, ị nweghị nhọrọ. Ma, ọ bụrụ na ha emeghị ya, i nwere ike iji ha abụọ mee ihe bara uru!
Ịkekọrịta - ime ka ndị ọbịa nwee ike ịkekọrịta ọdịnaya gị ga-eme ka ndị ọbịa karịa karịa ịhapụ ya na oge. Onye ọ bụla na-elekọta mmadụ na saịtị nwere onwe ha na-elekọta mmadụ nkekọrịta bọtịnụ na-adịghị achọ otutu nzọụkwụ ma ọ bụ logins… mee ka ọ dị mfe ịkọrọ gị ọdịnaya na ndị ọbịa ga-eso ya. Ọ bụrụ na ịnọ na WordPress, ịnwekwara ike iji ngwa ọrụ dịka Jetpack iji na-ebipụta isiokwu gị na akpaghị aka site na ọnụọgụ ọwa ọ bụla.
Imagery - a foto bụ uru a puku kwuru. Inye onyonyo ma ọ bụ vidiyo na post gị na-azụ uche ma mee ka ọdịnaya gị dị ike. Ka ejiri ọdịnaya gị kerịta ihe onyonyo ga - ekekọrịta ya gafee saịtị mmekọrịta gị… jiri amamihe họrọ ihe onyonyo gị ma tinye ederede ọzọ na nkọwapụta kachasị mma. Na-eji nnukwu post thumbnail na ndị kwesịrị ekwesị na-elekọta mmadụ na ndepụta plugins ga-eme ka o yikarịrị ka ndị mmadụ ọ ga-apị mgbe ịkekọrịta.
content - Debe ọdịnaya gị dị ka nkenke dị ka o kwere mee iji mee ka isi ihe gị kwubie. Jiri akara aka, isiokwu nta, okwu gbara ọkpụrụkpụ na italic iji nyere ndị mmadụ aka ịlele ọdịnaya ahụ ka ọ dị mfe ma nyere igwe ọchụchọ aka ịghọta isi okwu na ahịrịokwu ịchọrọ ịchọrọ. Mụta otú jiri Keywords nke ọma.
Onye edemede Profaịlụ - Inwe onye nchoputa ihe omuma gi nyere gi aka. Ndị mmadụ chọrọ ịgụ ihe sitere na ndị mmadụ… amaghị aha anaghị enyere ndị na-ege ntị aka na blọọgụ nke ọma. Ọzọkwa, aha ndị edemede na-ewulite ikike na mmekọrịta mmadụ na ibe ya gbasara ozi ahụ. Ọ bụrụ na m gụọ nnukwu post, m na-esokarị onye ọ bụla na Twitter… na mgbe ahụ, m na-agụ ọdịnaya ndị ọzọ ha na-ebipụta.
Comments - Okwu kwalite ọdịnaya na ibe ya na ọdịnaya ndị ọzọ dị mkpa. Ha na-enyekwa ndị na-ege gị ntị ohere itinye aka na akara ma ọ bụ ụlọ ọrụ gị. Anyị ahapụla ọtụtụ plugins nke ndị ọzọ wee họrọ naanị maka ndabara WordPress - nke etinyere n'ime ngwa ngwa ha, na-eme ka ọ dị mfe ịzaghachi ma kwado.
Kpọọ Iji Mee Ihe - Ugbu a ị nwere onye na - agụ ya na blọgụ gị, kedụ ihe ị chọrọ ka ha mee? Ọ ga-amasị gị ka ha denye aha? Debanye aha maka nbudata? Gaa ngosipụta nke ngwanrọ gị? Njikarịcha nke blọgụ gị ezughi ezu belụsọ ma ịnwere ụzọ maka onye na - agụ ya iji soro ụlọ ọrụ gị nwee mmekọrịta miri emi.
Categories na Mkpado - Oge ụfọdụ ndị na - achọ ihe nchọta ihe na - agabiga ma ha anaghị ahụ ihe ha na - achọ. Inwe ederede ndi ozo edeputara nke di nkpa nwere ike inye ndi nleta miri emi karie ha. Nwee ọtụtụ nhọrọ maka onye ọbịa ahụ ka ị nọrọ ma tinyekwuo na ya! Nwere ike inyere nke a site n'ịhụ na ị nwere ọgụgụ isi dị iche iche, na-anwa ịnye ọkwa ọ bụla na opekempe nke ha. Maka mkpado, ị ga - achọ ịme ihe ọzọ - na - anwa ịgbakwunye mkpado maka mkpokọta isiokwu nwere ike ibuga ndị mmadụ na post. Mkpado anaghị enyere SEO aka dịka nchọta n'ime na posts metụtara ya.
Tupu m ebipụta ọ bụla Blog Post
Ihe ka ọtụtụ n'ime ihe ndị a dị egwu na-arụ ọrụ ma na-akpaghị aka na ntinye na nhazi nke usoro ịde blọgụ gị. Ozugbo m tinyere oge na ọdịnaya ahụ, ana m aga ụfọdụ usoro ọsịsọ iji bulie ozi m ike, ọ bụ ezie:
aha - M na-agbalị ijikọ na onye na-agụ ihe ma mepụta echiche nke ịmata ka ha wee pịa. M na-agwa ha okwu ozugbo gị ma ọ bụ gị!
Foto a na-apụta - M na-agbalịrị ịchọta ihe oyiyi pụrụ iche ma na-adọrọ adọrọ maka post. Ihe oyiyi kwesịrị ime ka ozi ahụ sie ike.
Uzo - Ndị ọbịa na-enyocha tupu ha agụ, yabụ ana m anwa iji isiokwu nta, ndepụta ndị edeturu, listi ọnụ ọgụgụ, ngọngọ ngọngọ, na onyonyo nke ọma ka ha wee nwee ike ịkụnye ihe ọmụma ha chọrọ.
Zipu Post - M na-agbalị ịnọgide n'okpuru okwu 5 na nnukwu mkpa maka isiokwu ahụ. Nke a na-eme ka ịkekọrịta dị mfe na njikọ ahụ na-akpali akpali.
Visuals - M na-achọkarị Youtube maka vidio ọkachamara ịkekọrịta ma jiri ọtụtụ onyonyo dịka m nwere ike. Ana m edegharị ihe oyiyi ahụ n'ụzọ dị irè site na iji nkụfụ, nke na-enyere aka maka nyocha ihe oyiyi na njikarịcha peeji. Rịba ama ihe osise m gosipụtara maka post a blog-post-checklist.png.
Links - M na-agbalịrị mgbe mgbe ịgụnye njikọ dị na posts dị mkpa n'ime ọdịnaya m ka onye na - agụ ya nwee ike ịkụ ala maka ozi ndị ọzọ.
Category - M na-agbalị naanị họrọ 1 ma ọ bụ 2. Anyị nwere ụfọdụ ihe omimi miri emi nke na-ekpuchi karịa mana m na-anwa idebe lekwasịrị anya nke ọma.
Tags - M na-ekwu banyere ndị mmadụ, ụdị na aha ngwaahịa m na-ede banyere ya. Na mgbakwunye, Aga m eme nyocha na nchịkọta isiokwu ndị mmadụ nwere ike iji chọọ post.
Meta Description - Nkọwa ahụ pere mpe n’okpuru aha na njikọta na post gị na peeji nsonaazụ njin ọchụchọ nwere ike ịchịkwa nkọwa nkọwa. Wepụta oge wee dee nkọwa na-akpali akpali nke na-eme ka ịmata ihe na-agwa onye ọrụ ọchụchọ ihe kpatara ha ji pịa isiokwu gị.
Asụsụ na Asụsụ - Enwere ederede ole na ole m na-ebipụta na anaghị m agbanye isi n’onye ihere ka m gụrụ ụbọchị ole na ole ma ọ bụ nweta azịza site n’aka onye na-agụ ya na nzuzu ụtọasụsụ ma ọ bụ mkpoputa m mere. M na-agbalị iji nyochaa ọ bụla post na Grammarly ịzọpụta onwe m… gị onwe gị kwa!
Mgbe m na-ekwusara ọ bụla Blog Post
Promotion - Eji m n’aka na m kwalite posts M na-ede na ọwa ọ bụla na ohere ọ bụla, na-ahazi nlele na mkpado ndị mmadụ, hashtags, ma ọ bụ saịtị m kwuru.
Ngwaọrụ dị ka Agorapulse nwere ike ịba uru iji wepụta nkwado nke edemede ọ bụla. Articlesfọdụ isiokwu na-ewu ewu nke ukwuu na m na-ahazi otu tweet kwa ọnwa, ihe omume m na-ahazi ruo ihe omume, yana ihe ndị ọzọ m na-ekwughachi otu oge ka ọ bụ ihe ezi uche dị na ya. Ọ bụ ihe ịrịba ngwá ọrụ na-eme ka ndụ m nke ukwuu mfe. Nke a bụ ego ole ọ na - enyere aka na mgbasa ozi mmekọrịta m… ọnwa ruo ụbọchị:
ngosi: Abụ m onye nnọchianya na-etu ọnụ maka Agorapulse!
Ndị a bụ isiokwu metụtara njikarịcha nke nwekwara ike inyere gị aka:
Tags: onye edemede profaịlụblog postblog post njikarịchaigeAtiyanyochacontent Marketingagba oyiyiotúesi eweputa akwukwo ozooyiyinjikọta n'imeisiokwu ojijinjikarịchaebuli blog postaha peejislugbiputere thumbnailpost aha-ekere òkèSocial Media Marketingmmekọrịta mmadụ na ibe yaịkpadovideosyoutube
Ọkt 24, 2012 na 4:38 AM
Atụmatụ dị ukwuu!
Daalụ maka ịkekọrịta! 😉
Dec 23, 2012 na 2:07 PM
ndị a bụ ndụmọdụ bara uru n'ezie.
Feb 1, 2013 na 12:13 PM
Daalụ maka ozi a dị mkpa na Tags dị iche iche na ihe ebumnuche nke ụdị edemede ọ bụla bụ. I kpochapula ọtụtụ echiche m "igwe ojii" na okwu mkpado.